तमाकोशीको २ करोड ६३ लाख कित्ता आइपिओ आउँदै, कस्ले कती गर्ने आवेदन ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले साधारण सेयर आइपिओ निष्काशनको लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । विभिन्न विवाद र खिचातानीमा परेको आयोजनाले स्थानिय र सर्वसाधारण दुवैका लागि आइपिओ जारी गर्न लागेको हो ।
४ सय ५६ मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयबासीका लागि १० प्रतिशत र सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्न लागेको जनाएको छ । जस अनुसार स्थानियको लागि १ करोड ५ लाख कित्ता तथा सर्वसाधारणका लागि १ करोड ५८ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गर्नेछ ।
आयोजनाले आवेदन सीआस्वा प्रणाली मार्फत लिने जनाएको छ । सीआस्वामा आबद्ध नभएका लगानीकर्ताले सेयर आवेदन गर्न नपाउने भएकाले सी आस्वा प्रणालीमा आबद्ध हुनको लागि आयोजनाले लगानीकर्तालाई अनुरोध गरेको छ ।
स्थानीयबासीका लागि कम्पनीको सेयरमा ३० कित्ताभन्दा माथि र सर्वसाधारणका लागि १० कित्तादेखि माथि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रारम्भीक तयारीमा आयोजना रहेको छ ।
९४ प्रतिशत निर्माण कार्य पुरा भएको माथिल्लो तामाकोशीले आगामी वर्षदेखि नियमित रुपमा बिद्युत उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरेको छ । लगानीकर्ताले आयोजनाले उत्पादन थालेको दिनबाट आम्दानी गर्न सक्ने भएकाले केही वर्ष भित्रमा प्रतिफल बितरणको आधार बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
२०७४ फागुन २० गते प्रकाशित ।